फाइबर, हाम्रो शरीरको लागि किन आवश्यक छ ? यसको कमीले के-के नोक्सान हुन्छ, जानीराखौँ – Etajakhabar
फाइबर, हाम्रो शरीरको लागि किन आवश्यक छ ? यसको कमीले के-के नोक्सान हुन्छ, जानीराखौँ
हाम्रो शरीरको राम्रो स्वास्थ्यको लागि विभिन्न किसिमको पोषक तत्वले भरिपूर्ण आहारको आवश्यकता पर्दछ । यी आहारको पाचन सन्तुलित रूपमा हुन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । फाइबर शरीरमा सन्तुलित ढंगले पाचनको लागि जिम्मेवार हुन्छ । हुनत: फाइबरबाट हामीलाई कुनै पनि किसिमको पोषण मिल्दैन तरपनि यो हाम्रो शरीरको लागि निकै आवश्यक तत्व हुन्छ । फाइबर तपाईको पेटमा लामो समय सम्म रहन्छ, जसको कारणले तपाईलाई पटक-पटक भोक लाग्दैन । फाइबरको यो गुण तपाईको वजन कम गर्नका लागि निकै मद्दत गर्छ ।
फाइबर के हो?
फाइबर एक किसिमको कार्बोहाइड्रेट हुनेगर्छ, जसमा पोषण त कम हुन्छ तर यसले पाचन प्रक्रियालाई सन्तुलित रूपमा संचालन गर्न निकै महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ । फाइबर दुई किसिमको हुन्छ, पहिलो घुलनशील फाइबर र दोस्रो अघुलनशील फाइबर । घुलनशील फाइबर युक्त आहार पानीमा सजिलै घुल्छ । यसले शरीरको भित्र घुलेर एक किसिमको गाढा तरल अर्थात् जेल बनाउँछ, जसले कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । यो ब्लड शुगर तथा डायबिटीजको रोगीको लागि फाइदाजनक हुन्छ । यसको साथै अघुलनशील फाइबरले शरीरमा अपशिष्ट भोजनलाई सफा गर्ने काम गर्छ । अघुलनशील फाइबर वजनलाई नियन्त्रण गर्नमा उपयोगमा ल्याइन्छ ।
फाइबरले भरिपूर्ण आहारको दिनहुँ सेवन गर्नु राम्रो स्वास्थ्यको लागि निकै आवश्यक हुन्छ । विशेषगरी शुगर, मोटोपन र डायबिटीजको रोगीले हरेक दिन फाइबरयुक्त आहारको सेवन गर्नुपर्दछ । फाइबरको स्रोत जस्तै: गहुँको पिठो, हरियो सागपात, स्याउ, मेवा, अंगुर, काक्रा, टमाटर, प्याज, छिल्का सहितको दाल, सलाद, सख्खरखण्ड, दलिया, बेसन र सूजी जस्ता खाद्य पदार्थ हुन ।
फाइबरको कमी हुँदा के हुन्छ?
फाइबरको उचित मात्रामा सेवन नगर्दा शरीर मोटोपनको शिकार हुन्छ । पेट सफा नहुँदा मुखको छाला निस्कनु सामान्य कुरा हो । फाइबरको कमीले कब्जियत, ग्यास्ट्रिक, पेट सम्बन्धि अन्य रोगहरू जस्तै अल्सर आदि समस्याबाट जुध्नु पर्दछ । यसको साथै आन्द्राको क्यान्सर, बवासीर, मुटु रोगहरू पनि फाइबरको उचित मात्राको सेवन नगर्दा हुनसक्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ०२, २०७४ समय: १६:०४:५०